शिक्षा मन्त्रालय र प्रदुषित नेपाली आकाश मुनिका ट्युसने विद्यालयहरु - Setomasi
शनिवार, बैशाख ४ गते २०७८
शिक्षा मन्त्रालय र प्रदुषित नेपाली आकाश मुनिका ट्युसने विद्यालयहरु
चैत्र १८, २०७७ बुधवार ०५:१५ बजे
नेपाली आकाशमा वायु प्रदुषण बढेको र त्यो प्रदूषणले बिद्यार्थीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले सोमबार सुचना जारी गर्दै मंगलबार देखि ४ दिन शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । तर मन्त्रालयको निर्णय कसैले लागू गरे, कसैले गरेनन ।
मन्त्रालयको विश्लेषण ठिक थियो । अहिले पनि नेपाली आकाशमा फोटो, भिडियो र प्रत्यक्ष हेर्दा पनि बाक्लो तुवाँलो देखिएको छ । यद्यपि देशमा संघीयता लागू भए सङ्गै धेरै अधिकार स्थानिय निकायमा पनि छ । अझै त्यो भन्दा पनि हरेक जिल्ला हरेक क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरुका आ-आफ्नै संगठन हरु पनि छन । ती संगठन हरुको पनि आफ्नै निर्णय हुन्छन नै । तर शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको बैठकले गरेको यो आकस्मिक निर्णयले फाइदा भन्दा धेरै अन्योल र भ्रम शृजना गरेको जस्तो देखिन्छ ।
सामान्य बुझाइमा पनि वायु प्रदुषणले ढाकिएको आकाश शिक्षण संस्थामा मात्रै नभएर घर, समुदायको आकाशमा पनि उस्तै हुन्छ । घरमा लाग्ने हावा, सामुदाय, स्कुल शहर बजारमा लाग्ने हावा एउटै हो । समुदायमा भन्दा शहरमा प्रदुषण केही मात्रामा बढी चै हुन्छ ।
मन्त्रालयको निर्णयमा धेरै शिक्षण संस्थाले असहमती जनाउदै स्कुल कलेजहरु संचालन गरिरहेका छन । केही निजि स्कुल हरुमा परीक्षा चलिरहेको छ । केही स्कुलहरुमा परिक्षाको तयारी चलिरहेको छ । यो अबस्थामा के गर्ने ?? मन्त्रालयले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने थियो । यसको अलावा मन्त्रालयले वायु पदूषण कम गर्न के के उपाय अपनाउनु जरुरी छ भनेर सचेतना फैलाउन सक्नु पर्थ्यो ।
कतिपय शिक्षण संस्थाहरुले नियमित पठनपाठन बन्द गरेका छन तर तिनै शिक्षण संस्थाले कोचिङ र ट्युसन क्लास बन्द गरेका छैनन् । यसलाइ कसरी लिने ? आखिर फाइदा हुने भए पछि बायु पदूषणले असर नगर्ने रहेछ भनेर बुझ्न आम मानिस लाई गाह्रो नहोला ।
अहिले यसै पनि हिउँदको समय बन-जंगलमा आगलागीहरुका घटना निकै भैरहेका छन । खेत बारिमा धान, गहुं र तोरी भित्राइसकेपछि तिनका पराल, नरुवाहरु खेत बारिमै जलाउने चलन छ । तिनीहरुलाइ ब्यबस्थापन गर्नको लागि चेतनामूलक सुचना पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो । टोल बिकास संस्था, सामुदायिक संस्थाहरु मार्फत घरको दायाँबायाँ जलाइने फोहोर हरुलाइ ब्यबस्थापन गर्न सुझाउनु पर्ने थियो ।
एक त कोरोनाको डर, त्रास र लकडाउनले धेरै बिद्यार्थीको एक बर्षको समय त्यत्तिकै जांदैछ । बिचमा लकडाउनले अबरोध गरेको समयलाइ पनि अहिले बिद्यार्थीले दोब्बर समय लगाएर, कोचिङ, ट्युसन पढेर भए पनि पाठ्यक्रम पूरा गर्ने तयारिमा छन त्यै पनि पठन पाठनमा यस्ता अस्वाभाविक उर्दि र निर्देशनले पढाइ लाई त असर गर्छ नै अझै असर विद्यार्थी र उनको अभिभावक लाइ मानसिक रुपमा असर गरेकै हुन्छ ।
यो चैत बैशाख को समय पानी नपर्ने र जमिन सुख्खा रहने हुंदा अझै आगलागी हुने, बन जंगलमा डढेलो लाग्ने क्रम चल्नेछ । हावा लाग्दा भुइको धुलो उडाएर बायुमन्डल मा पुग्ने र त्यसले अझै धेरै असर गर्न सक्छ । तुवाँलो लागिरहने र वायु मण्डलमा असर परिरहने हो भने कति दिन शिक्षण संस्था बन्द गर्ने ?
के शिक्षण संस्था बन्द गर्नु मात्रै तुंवालोको समाधान हो त ? तसर्थ हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ । सचेतना फैलाउनु जरुरी छ ।
# अशोक गौतम “क्षितिज”
# #शिक्षा मन्त्रालय,
विद्यार्थीको भविष्यमाथी केरवानी माविको गम्भीर लापरबाही, विद्यार्थीको एक बर्ष गुम्ने खतरा
अर्घाखाँचीको सरस्वती माता माविलाइ स्मार्ट युवा क्लबकाे ध्यानाकर्षण पत्र
अर्घाखाँचीको सरस्वती मावि ४ महिनादेखी शिक्षक बिहिन्, २ पटक सर्यो परिक्षा
तिलोत्तमा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा ६ सामुदायिक बिद्यालयद्वारा बस खरिद
क्यान रुपन्देहीद्वारा शुभकामना आदानप्रदान तथा क्यालेन्डर विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न
कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा जोगियो शाही सरकार
रोगसंगै भोकको पनि उपचार गर्ने चिकित्सक अधिकारीलाई बाबुराम भट्टराईको सलाम !
भरिया - कविता
बुटवलबाट हराएका बसेलको शव ढोरपाटनमा गाडिएको अवस्थामा फेला
Copyright © 2021 All right reserved to setomasi.com